China Carton muchina gundi fekitori uye vanotengesa | DESAY
2 chitarisiko: mukaka chena viscous mvura
3. Inokodzera bhokisi rekunamatira muchina, yakasimba kunamatira, inokurumidza kuomesa, yakagadzikana zvivakwa, inokodzera kunamatira pamusoro pega-padivi ruvara kudhinda laminated bepa.
4.Kushandisa: Inoshandiswa zvakanyanya mupepa regoridhe kadhi, pepa rekudhinda ruvara, rakakosha bepa, BOPP, PVC glazing zvinhu uye mamwe chete-mativi akaputirwa mapepa-epurasitiki mabhokisi ekupakata, mabhokisi ezvipo, mabhokisi ewaini, mabhegi, nezvimwewo. .
Magadzirirwo: 0.5L, 0.68L, 1L, 1.3L, 5KG, 10KG, 25KG
Ruvara rwekunze: mukaka
Solid zvemukati: 50-55%
(1) pretreatment: guruu unomutsa zvakaenzana
(2) sizing: glue inowedzerwa kune inoenderana nzvimbo yekuchengetera nzvimbo, uye muchina unogona kutangwa
(3) kurapa: makatoni / makatoni kubva kumuchina mushure mekusunga kana kurongedzwa wakamira zvakare, kuitira kuti gundi rinyatso simbisa
(4) kudzivirira izvo zvinoitika zvekusvetuka.
Chigadzirwa zita: yakakosha yekuisa chisimbiso glue yebhokisi yekunamisa muchina
Tora SEAL - H
Unyanzvi hwakawanda maratidziro
Ruvara rwekunze rwakachena machena
Mhando dzinofanirwa kuenderana
Kurapa nguva 5-10 maminetsi
Pasherufu hupenyu i12 mwedzi
chigadzirwa zita Katoni muchina chisimbiso Zita reBrand kuneta
mhando CHISIMBISO-H Viscosity（MPS.S) 18000 ± 2000
Magadzirirwo 0.5L、0.68L、1L、1.3L、5KG、10KG、25KG PH 6-7
Ruvara rwekunze mukaka Kurapa nguva 10-30min
Solid zvemukati 50-55% Pasherufu hupenyu Mwedzi gumi nembiri
1, Yakasimba viscosity uye yakagadzikana zvivakwa
2、Iyo glue inova pachena mushure mekusimbiswa
Inokodzera goridhe kadhibhodhi, pepa rekudhinda pepa uye rimwe chete-rakasendekwa rakaputirwa pepa uye epurasitiki mapakeji mabhokisi, zvipo mabhokisi, kuiswa chisimbiso, kumucheto chisimbiso.
Inogona kuve yakananga kupendwa pamushini pasina kuwedzera mvura uye kuonda. Kurudzira zvakanaka usati washandisa. Ive neshuwa yekuchengetedza iyo glue mune yakanyorova mamiriro. Mushure mekubatana, izvo zvinhu zvinofanirwa kuchengetwa zvakatsikirirwa kweanopfuura maminetsi makumi matatu, zvobva zvaomeswa zvakasikwa.
1. Usasanganise chigadzirwa ichi neimwe glue, zvikasadaro iyo glue inodzikira uye haigone kushandiswa.
2. Simbura nekukurumidza mushure mokutora iyo glue kuti usadzivirire-kuomesa mweya uye kuita ganda. Iyo glue inotora maturusi inofanirwa kuve yakachena, kuti irege kuunza zvakasviba uye kukanganisa hunhu.
3. Zvinyorwa zveOPP neBOPP zvine inert uye zvinonetsa kutevedzera. Naizvozvo, iwo anofanirwa kushandiswa zvinoenderana nemaitiro ekushandisa pavanotevedzwa. Zvikasadaro, kuputika kunogona kuitika nyore nyore.
4. Kunyangwe kubatana kwacho kuri kwakanaka, ndokumbira utarise mushure memaawa masere ekuomesa.
Ruvara uye viscosity yechigadzirwa ichi chinoshanduka nekuchengetedza nguva uye tembiricha. Iyo inzvimbo yakasarudzika yeglue, asi haina kukanganisa kubatana kweiyo glue.
Mushure mekushandisa, inofanirwa kuvharwa uye kuchengetwa munzvimbo yakaoma uye inotonhorera, tembiricha iri (10 ~ 30 ℃), uye dzivirira zuva rakananga.
Pashure: 110 mhando kraft bepa rinonamira mvura jira guruu
Zvadaro: Chinyorwa Chisimbiso Glue
Katoni muchina chisimbiso